सुदर्शनले जे गरे गलत गरे - प्रतिक्रिया - साप्ताहिक
सुदर्शनले जे गरे गलत गरे
कलाकार सुदर्शनले जे गरे त्यो एकदमै गलत हो (कहिल्यै नपुगिने अमेरिका : फिल्मी शैलीको दुर्दान्त घटना) । यो घटना अन्य कलाकाहरूका लागि ठूलो पाठ हो । आखिर आफ्नो गल्ती कुनै न कुनै बेला बाहिर आइ नै हाल्छ ।
यो विषयमा सरकार एकदमै संवेदनशील बन्नुपर्छ (मंगल होस् : स्वदेश एजुकेसनल कन्सल्टेन्सी) । नेपाल हिमालका लागि धनी छ, तर हिमालका बारेमा पढ्न विदेश जानुपर्छ । यो विषयमा नेपालमै पढाइ हुनुपर्छ । नेपालमै सम्भावनाहरू खोजिनुपर्छ ।
नयाँपन दिन सकिएन भने यस्तो अवस्था आउँछ (न हिट, न फ्लप !) समयअनुसार फरक प्रस्तुति एवं स्वाद दिन सक्नुपर्छ ।
बधाई छ प्रथम मिस नेपाल युनिभर्स नग्मा श्रेष्ठलाई (मिस नेपाल अर्थ अमेरिकामा नग्मा) । यो उनका लागि ठूलो उपलब्धि हो भने उनीप्रतिको सम्मानसमेत हो ।
सामाजिक परिवर्तन, जनचेतनाभन्दा पैसा कमाउने दाउ बढी देखियो (यात्रा सन्दर्भ : दीपकको दाउमा छक्कापन्जा) । चलचित्र बनाउँदा सामाजिक उत्तरदायित्वको भावनालाई पनि आत्मसात् गर्नुपर्छ ।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आफ्नो बलियो उपस्थिति देखाओस् (विश्वकप फुटबलपछि अब एसियाड) । सरकारले खेलाडीहरूलाई सहयोग गर्न कुनै कसर बाँकी नराखोस् ।
वास्तविक कथाले मानिसको मन छुँदो रहेछ (अन्तरवार्ता : आफ्नै जीवनलाई दोहोर्‍याउँदा धेरै पटक भक्कानियौं) । यसको ज्वलन्त उदाहरण बोबी चलचित्रले देखाएको छ । उमेश थापा र कविता गुरुङको जोडी उदाहरणीय छ । उनीहरूको संघर्ष प्रशंसनीय छ । हिम्मत हारेकाहरूका लागि यो जोडीले आत्मबल थपेको छ ।
यो सामग्री उपयोगी छ (एसईईपछि : ओभरसियर बन्ने कि ?) । नेपालभन्दा बाहिर कहाँ–कहाँ यो विषयको अध्यापन हुन्छ, कति खर्च लाग्छ ? भन्ने विषयमा पनि जानकारी समेटिए अझ रोचक हुने थियो ।
यो याहु म्यासेन्जर प्रयोगकर्ताहरूका लागि दु:खको कुरा हो (बन्द भयो याहु म्यासेन्जर) । कुनै समय याहु म्यासेन्जरले धेरैको सम्बन्ध जोडेको थियो । यति लोकप्रिय याहु म्यासेन्जरलाई बन्द गर्नुको साटो नयाँ ढंगमा चलाएको भए हुन्थ्यो ।
दीपशिखा मिश्रको कुराकानी रोचक लाग्यो (कुराकानी : नेपाली भाषा स्विट लाग्छ) । भारतमा जन्मिएकी, वीरगन्जलाई कर्मथलो बनाएकी दीपशिखाको लगनशीलता प्रशंसनीय छ ।
गत अंकमा प्रकाशित फेसबुक फन्डा रमाइलो लाग्यो ।
नेपालीहरूको आमप्रवृत्तिलाई अविरल थापाले टपक्कै टिप्नुभएको छ (मुक्त आकाश : मिटिङमा छु है) । फुर्सदमा भएका मानिसहरू पनि काम गर्नुपर्दा मिटिङमा छु भनेर टार्छन् । यो प्रवृत्ति सुधार्नुपर्ने देखिन्छ ।
यस्तो प्रतियोगितामा नेपालको सहभागिता हुनु सकारात्मक कुरा हो (डेफ इन्टरनेसनलमा नेपाल) । स्वदेशमै पनि थुप्रै क्षमतावान् प्रतिभा छन्, तर अवसरको अभावले ओझेलमा परेका छन् । यति राम्रो कार्यक्रमका लागि आयोजकहरूलाई धन्यवाद ।
इन्डोनेसियामा हुने १८ औं एसियाली खेलकुदमा सहभागी हुन लागेका पर्शुराम बास्तोलालाई अग्रिम शुभकामना (पाँच प्रश्न) । यो प्रतियोगितामा बास्तोलाले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्नेछन् भन्ने विश्वास छ । नेपालको नाम राख्नुहोला ।
बधाई म्याराडोनालाई (म्याराडोनाले गरे इन्गेजमेन्ट) । ओलिभासँग उनको भावी जीवन सुखद होस् ।
सीमा भुर्तेललाई बधाई (मिसेज नेपाल आइकन–२०१८) । आगामि दिनमा आयोजना हुने अन्य प्रतियोगिताहरूमा पनि भाग लिन नछुटाउनुहोला ।
त्यो माला लिम्बूको स्वभाव हो (म घमन्डी छैन) । हरेक मानिसको आ–आफ्नै स्वभाव हुन्छ । आफ्ना कुरा प्रस्ट रूपमा अभिव्यक्त गर्ने उनको बानीलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन ।
फ्लेयरले गरे पाँचौं विवाह